Liverpool Oo Soo Bandhigtay Garamadeeda Cusub Oo Ay Shirkad Cusub U Samaysay Iyo Dhibaatadii Maxkamadda Ee Shirkaddii Hore - Gool24.Net
Liverpool Oo Soo Bandhigtay Garamadeeda Cusub Oo Ay Shirkad Cusub U Samaysay Iyo Dhibaatadii Maxkamadda Ee Shirkaddii Hore
August 1, 2020 Abdiwahab Ahmed Abeeye
Kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa soo bandhigtay garamada ay ku ciyaari doonto xili ciyaareedka dhawaanta bilaabmi doona, kaas oo ay u samaysay shirkad cusub oo u beddeshay New Balance oo ay dacwad maxkamadeed iskula jireen in muddo ah, ugu dambayntiina ay kala baxeen.
Liverpool ayaa ka baxday heshiiskii ay kula jirtay New Balance, waxaanay uga wareegtay shirkadda NIKE oo qandaraas ay lacago badan ku helayso Reds la gashay, kaas oo si buuxda u dhaqan galay maanta oo ay taariikhdu tahay August 1 oo dharkii ugu horreeyeyna suuqa lasoo geliyey.
Nike oo iyadana Maraykanka laga leeyahay, xarunteeduna tahay Oregon, ayaa waxay Liverpool kusoo kordhisay dhar ay si gaar ah ugu naqshadaysay, taas oo ay ku doodday inay tamar iyo awood cusub u horseedi doonto kooxda.
Heshiiska ay Liverpool la gashay Shirkaddan oo shan sannadood soconaya ayaa waxa dharka ugu horreeya ee xili ciyaareedka soo socda oo ka kooban saddex nooc oo ah kulamada hoygooda ay ku ciyaarayaan oo ah midabkooda casaanka ah iyo laba kale oo loogu talo-galay kulamada martida, si buuxda suuqa loo gelinayaa August 4, laakiin gellinka dambe ee maanta ayaa dukaamada kooxda ee qaaradda Yurub laga heli doonaa.
Agaasimaha cusub ee Liverpool ee Billy Hogan oo xilka la wareegaya dhowaan ayaa waxa uu warbaahinta u sheegay in Nike ay noqonayso shirkad waxyaabo cajiib ah kusoo kordhisa dharka kooxda, sidii ay hore usii sheegeen bishii January.
Garamada kooxda ee cusub ayaa waxa ka dhex-muuqda astaamo lagu xasuusanayo musiibadii Hillsboorough oo 96 carruur, dumar iyo rag iskugu jiray ay ku dhinteen gudaha garoonka.
Virgil van Dijk oo ka mid ah ciyaartoyda xayaysiiya shirkadda Nike ayaa ka hadlay in kooxdiisuna kusoo biirtay isla shirkaddan, waxaanu yidhi: “Anigu waxaan qoyska Nike ka mid ahaa lix sannadood, waxaananu lahayn xidhiidh saaxiibtinimo oo cajiib ah. Waxaan aqoon fiican u leeyahay tayada dharka ay naqshaynayaan, in aanu xili ciyaareedka dambe horyaalka ku qaadnaana waxay noqon doontaa wax cajiib ah.”
Si kastaba ha ahaatee, dukaamada waaweyn ee shirkadda Nike ku leedahay qaaradda Yurub ayaa maanta gellinka dambe lasoo dhigi doonaa garamadan, sidoo kalena dukaamada Liverpool ayaa la geyn doonaa, halka dunida oo dhanna la gaadhsiin doono August 4.